जे होस् बिधा चापागाईले साझा सवालको यो अँकमा रोल्पाबाट निर्बाचित जनयुद्दका ब्रिगेडर बर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीमगरको घाँटी निमोठेर जनताका आँगनमा ड्याम्मै पछारेकै हो। भिडियो – Complete Nepali News Portal
जे होस् बिधा चापागाईले साझा सवालको यो अँकमा रोल्पाबाट निर्बाचित जनयुद्दका ब्रिगेडर बर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीमगरको घाँटी निमोठेर जनताका आँगनमा ड्याम्मै पछारेकै हो। भिडियो
ScotNepal December 27, 2017
साझा सवाल अंक ५२४ हेरेपछि रोल्पाको एक झुपडीमा जिन्दगीसँग सँघर्ष गरिरहेका दुईजना बुढाबुढी आमाबुवाका कथा ब्यथाले हृदय तहसनहस बनाईदियो।बिचरा यी बुढाबुढीका एउटै मात्र छोरा भुबन जनयुद्दको बेला शहीद भएका रहेछन् । शहीदका परिवारले पाउने दशलाख पनि यिनीहरुले आजसम्म पाएका छैनन्। बुढा बा भीरबाट लडेर हिँड्नै नसक्ने गरी थलिएका छन्।बुढी आमा राम्रो सँग बोल्न पनि जान्दिनन्।घरको छानो मकाएको छ, सिकुवाको डिल भत्किएको छ। अनुहारमा बाङगीटिङगा चाउरीका रेखाहरुले यिनीहरुको जीबनलाई छोट्याउँदै गएको भान हुन्छ।
माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धको उद्गमथलो रोल्पा, युद्ध रोकिएपछि कस्तो भयो होला ? युद्धकालमा योगदान गर्ने रोल्पालीको जीवन फेरियो कि उस्तै होला त ? रोल्पाको जेलबाङ, घर्तीगाउँ र थवाङ पुगेर तयार गरिएको साझा सवाल ।
साथमा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती र माओवादी नेता वर्षमान पुन । शहीदका पीता-माता मङ्ले बुढा र फर्की बुढासँग जेलवाङमा भेटेर उनीहरूको अवस्था देखेपछि युद्ध हाक्ने नेताले कस्तो अनुभुति गरे ?
सबिता भण्डारीको बच्चै देखिको साथीको सनसनीपूर्ण खुलाशा, बहिनीहरुमध्य निडर र...
बर्दियामा कहाँबाट आए यति धेरै हात्ती ? (भिडियोसहित)